नयाँ मिडिया घोषणापत्र | Martech Zone
शनिबार, अप्रिल 3, 2010 बुधबार, अप्रिल 29, 2015 Douglas Karr
चाखलाग्दो कुरा के छ कि सामाजिक मिडिया उद्योगमा ती व्यक्तिहरु विश्वास गर्छन् जुन सामाजिक मिडियाको सम्बन्धमा हुने सबै नयाँ छ। म प्रत्यक्ष मार्केटिंग, डाटाबेस मार्केटिंग, नेटवर्कि and र विज्ञापनमा फर्केर हेर्दा - म विश्वास गर्दिन कि व्यवसायका लागि हाम्रो लक्ष्यहरू बिल्कुलै फरक थिए। कसरी बारेमा धेरै कयामत र उदास कथाहरू छन् हरेक व्यवसाय अनुकूलन गर्नुपर्दछ वा तिनीहरू असफल हुन गइरहेछन्। मलाई विश्वास छैन कि त्यो सत्य हो।
जबकि म स्वीकार गर्दछु कि माध्यमहरू परिवर्तन भएको छ (र सुधारिएको), व्यवसायहरू अझै पनी प्रयास गरिरहन्छन् उनीहरूसँग जे छ सधैं। व्यवसायका लागि लक्ष्यहरू कहिले पनि फरक भएका छैनन्, यो माध्यमहरू र उपभोक्ताहरूको अपेक्षाहरू जुन परिवर्तन भएका छन्।
यदि मैले व्यवसायका लागि घोषणा पत्र लेख्नु पर्ने हो भने, यो सायद यी दशवटा लक्ष्यहरू हुन सक्दछन्:
मेरो व्यवसाय हुनेछ जहाँ उपलब्ध छ संभावना र ग्राहकहरु हामीलाई खोज्दै छन्।
मेरो व्यवसाय हुनेछ उपलब्ध हुँदा संभावना र ग्राहकहरु हामीलाई आवश्यक छ।
मेरो व्यवसाय हुनेछ प्रतिक्रिया दिनुहोस् संभावना र ग्राहकहरु एक अनुरोध गर्नुहोस्।
मेरो व्यवसाय सेट हुनेछ यथार्थपरक अपेक्षा संभावना र ग्राहकहरु को लागी।
मेरो व्यवसाय हुनेछ के वितरित ग्राहकहरु अपेक्षित
मेरो व्यवसाय हुनेछ वितरण जब हामीले भनेका थियौं।
मेरो व्यवसाय हुनेछ स्वीकार गर्नुहोस् जब हामी गल्ती गर्छौं।
मेरो व्यवसाय हुनेछ समाधान हाम्रो गल्ती
मेरो व्यवसाय हुनेछ ईमानदार तिमीसँग।
मेरो व्यवसाय हुनेछ प्रभावकारी कुराकानी बाटोमा प्रगति।
खुला, इमानदार, जवाफदेह र उपलब्ध भएको बदलामा, व्यवसायहरूले आशा गर्छन् कि सम्भाव्यता र ग्राहकहरूले सहयोग फिर्ता गर्नेछन् - कुराकानी गर्दै उनीहरूले कति राम्रो प्रदर्शन गरे। यो केवल राम्रो मार्केटिंग वा होईन नयाँ मार्केटिंग, यो राम्रो व्यवसाय हो। मैले सँधै काम गरेको व्यवसायको लक्ष्य यी नै हुन्।
जब तपाईं यी लक्ष्यहरू समीक्षा गर्नुहुन्छ, नयाँ मिडिया, अनुभवात्मक मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया, खोजी, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल वा कुनै अन्य मार्केटिंग माध्यमको बारेमा त्यहाँ केहि उल्लेख गरिएको छैन। ती माध्यमहरूको अस्तित्वले व्यापार लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँदछ - तर प्रत्येक व्यवसायले तिनीहरूलाई अपनाउने आवश्यक छैन।
तपाईंको कम्पनीले त्यो राम्रो पुरानो जमानाको चिसो बोलावटले चाल पाउँदछ। याद राख्नुहोस् - यो अझै पनी सत्य हो कि धेरैजसो व्यापार विश्वले सामाजिक मिडिया अपनाएको छैन, र धेरै सफल, बढ्दो र फलफूल फल्ने व्यवसायहरू हुन्। लिनुहोस् एप्पल उदाहरण को लागी… म सामाजिक मीडिया मा एप्पल खुला, पारदर्शी वा अत्यधिक संलग्न भएको देख्दिन - तर उनीहरू एकदम राम्रो गरिरहेछन्, हैन त?
मेरो कुरा कम्पनीहरूलाई सामाजिक मिडिया अपनाउने र प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु होइन। एकदम उल्टो यदि तपाईंको व्यवसाय माथिको घोषणापत्रको लक्ष्यहरू अपनाउन चाहन्छ भने, मलाई श I्का छैन कि उपयुक्त मिडिया र सही रणनीति दिएर सोशल मिडियाले तपाईंको व्यवसायलाई गति दिनेछ। यदि ती लक्ष्यहरू तपाईंको कम्पनीको लक्ष्यहरू छैनन् भने, सामाजिक मिडिया फिट नहुन सक्छ।
उफ्रिनु भन्दा पहिले सोच्नुहोस्! पानी चिसो र गहिरो छ। 🙂
छवि क्रेडिट: (सीसी) ब्रायन सोलिस। www.briansolis.com। रेखाचित्र हग म्याकलोडबाट हो Gaping शून्य.
टैग: ब्रायन एकलहग म्याकोडनयाँ मिडियासामाजिक संजाल
अप्रिल 4, 2010 मा 6: 54 एएम
म पूर्ण रूपमा सहमत छु। म धेरै कम्पनिहरु आफूलाई सोधेर सुन्न "हामी फेसबुक मा नयाँ ग्राहकहरु को लागी हुनु पर्छ?" अधिकको लागि उत्तर होईन, किनकि यसले तपाईंको पहिलो लक्ष्यलाई असफल बनाउँदछ: उपलब्ध हुन जहाँ सम्भावनाहरूले तपाईंलाई खोजिरहेका छन्। मानिस साथीहरु र परिवार संग कनेक्ट गर्न को लागी फेसबुक मा जान, हाँसो साझा गर्न, र आफ्नो अभिव्यक्त गर्न। तिनीहरू नयाँ कम्पनीहरूसँग व्यापार गर्न खोज्दैनन्। कम्पनीहरूले फेसबुक जस्ता उपकरणहरू प्रयोग नगरीकन सोशल मिडियाको उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्, जुन उनीहरूलाई नयाँ संभावनाहरू फेला पार्न मद्दत गर्न कहिल्यै डिजाइन गरिएको थिएन। स्वीकार्य रूपमा, व्यवसायको लागि सामाजिक मिडिया उपकरणहरू सुधार गर्न आवश्यक छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं बुल्हार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ जब तपाईंलाई चाहिने चीज भनेको चुम्बक हो।
अप्रिल 5, 2010 मा 11: 29 एएम
राम्रो पढ्नुहोस्, साझेदारीको लागि धन्यवाद!
मलाई तपाईंको सूची मनपर्‍यो। मलाई लाग्छ यसले अरूलाई उनीहरूको व्यवसायिक लक्ष्यहरू तय गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुसरण गर्दछ। मलाई सादा उदाहरण र व्यावहारिक सल्लाहहरू प्रस्तुत गर्ने पोष्टहरू मनपर्दछ।